Netflix ရဲ့ No Beation of Nation, Idris Elba သည် ၂၀၁၆ အော်စကာဆုအတွက်လျာထားခံရသည် - Netflix သတင်း
အဘယ်သူမျှမ Nation ၏ Netflix ရဲ့သားရဲ, Idris Elba 2016 အော်စကာဆုအတွက်လျာထားခံရ
ဖမ်းဆီးရမိဖွံ့ဖြိုးရေးရာသီ 5: Donald Trump ရောနှောခြင်းနှင့်လူသတ်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်း Netflix နှင့်ပတ်သက်သည့်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅၀: ၂၀၁၆ အော်စကာရွေးချယ်ခြင်း!
Netflix ၏မူရင်းရုပ်ရှင် Beasts of No Nation နှင့် Idris Elba တို့သည် ၂၀၁၆ အကယ်ဒမီဆုအတွက်အော်စကာဆုအတွက်လျာထားခြင်းမခံရပါ။
ငါဒီဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုတစ် ဦး ကြိုတင်ကြံစည်မှုခဲ့, ထိုသို့နောက်ဆုံးတော့လုပ်ခဲ့တယ် ...
ဘယ်အချိန်မှာ ၂၀၁၆ အော်စကာဆုလျာထားခံရသူများကိုကြာသပတေးနေ့နံနက်တွင်ကြေညာခဲ့သည် Netflix ၏မူရင်းရုပ်ရှင် အဘယ်သူမျှမလူမျိုး၏သားရဲ မည်သည့်အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်မှုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းတွင်စာရေးဆရာနှင့်ဒါရိုက်တာ Cary Fukunaga နှင့်ကြယ်ပွင့် Idris Elba တို့ပါဝင်သည်။
အွန်လိုင်းအမေရိကန်ထိတ်လန့်ဇာတ်လမ်းရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ 7
ဒါကြောင့်အံ့သြစရာအဖြစ်မလာပါဘူးနေစဉ် အဘယ်သူမျှမလူမျိုး၏သားရဲ အကယ်၍သာ အကယ်ဒမီကအမှားကြီးတစ်ခုကျူးလွန်မိသည်၊
ကျနော်တို့အမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုသို့သွားကြောင်းလမ်းလုံးဝနီးပါးမရှိသိတယ် အဘယ်သူမျှမလူမျိုး၏သားရဲ အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံလွှာအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရပြီး Fukunaga သည်အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရရှိရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။
ကင်မရာအော်ပရေတာထုတ်လုပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးအလွန်အမင်းနာမကျန်းဖြစ်သောကြောင့်လည်း Fukunaga ကရိုက်ကူးခဲ့သောရုပ်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုနှစ်မြင်ဖူးသမျှအခြားရုပ်ရှင်များကဲ့သို့ပင်လှပသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာတခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ in အနည်းငယ်မှာအမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ အိုငါလည်းအဲဒီမှာမှားနေတယ်
အော်စကာနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဆုံးဖြစ်သည့်အကောင်းဆုံးအချက်မှာအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးသူအတွက် Idris Elba ဖြစ်သည်။
ငါ့အတွက်, Idris Elba ဟာအကောင်းဆုံးအထောက်အကူပြုသရုပ်ဆောင်ဆုအတွက်သော့ခလောက်ဖြစ်ပြီး၊ ငါအဲဒီတုန်းကအတွေးထဲမှာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ သူ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့တစ်နှစ်လုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကထိုအချက်ကိုငြင်းတကယ်ရှိပါတယ်။ သူကပြီးပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာမှော်4ရာသီ netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟောလီးဝုဒ်ရှုခင်းမှာတော့အကယ်ဒမီကနေ Netflix ကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်မကျေနပ်မှုတွေရှိတယ်။ အကယ်ဒမီသည်ပြဇာတ်ရုံဟောင်းဇာတ်ကားရိုက်ကူးခြင်းကိုလေးစားပုံရသည်။ ဒါက Elba ဖွငျ့ခံရဖို့တစ်ခုတည်းသောယုတ္တိနိဂုံးချုပ်နှင့် လူမျိုးတမျိုး၊ အကယ်ဒမီက snubbed ခဲ့သည်။
Netflix ၏ ၂၀၁၅ ရုပ်ရှင်ကားများနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကဏ္ expansion တိုးချဲ့ခြင်းသည်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်။ Netflix ကမူရင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ Miss Simone နှင့် မီးပေါ်မှာဆောင်းရာသီ: လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ယူကရိန်းရဲ့ Fight အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆုအတွက်အော်စကာဆုအတွက်လျာထားခံခဲ့ရသည်။
ပိုများသော netflix:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅၀
ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ Miss Simone နှင့် ဆောင်းတွင်းမီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်အတွက်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၅၀ !
Netflix နှင့်ပြင်းထန်စွာကောင်းချီးပေမယ့် အဘယ်သူမျှမလူမျိုး၏သားရဲ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည့်အော်စကာဆုရရှိသူများသည်ယခုနှစ်တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်! ဒီညကြည့်ဖို့ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုရှာနေတယ်ဆိုရင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
တော်ဝင်ဝဒေနာရာသီ 8 Netflix streaming များ
ဂိမ်းအဘယ်သူမျှမဘဝရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ 1 english sub မျှ
Danny devito နှင့်အတူခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်
ထောင်ချိုးရာသီ5လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲ netflix